मैले त्यस बेला चिकाइको स्वाद थाहा पाएँ : भाग 1
ब्लू फिल्म हेरेपछि मलाई आफ्नो शारीरिक बनावट, पुरुषसँगको सम्बन्धप्रति नयाँ धारणा जागृत भयो । राति सुत्दा ओछ्यानमा म आफ्नो स्तन खेलाउने, पुती मुसार्ने, तिग्रामा सिरानी चेप्ने, घोप्टो परेर पुतीलाई ओछ्यानमा रगड्ने जस्ता काम गर्दथेँ । यसबाट मलाई केही आनन्दको अनूभू्ति हुँन्थ्यो । यसो गर्दागर्दै मलाई सेक्स गर्ने इच्छा जाग्यो तर कोसँग गर्ने भन्नेमा समस्या देखेँ । किनकी त्यतिन्जेल म कुनै पुरुषसँग नजिकिएकी थिइनँ । विनोद अंकलले बीरगंजमा मप्रति गरेको कृयाकलापले मलाई पुरुष जातिसँग टाढा बनाइसकेको थियो ।
तर अब म पुरुषसँग नजिक हुन चाहन्थेँ । यस्तैमा मेरो ध्यान हाम्रै छिमेकी श्रीराममा केन्द्रीत भयो । श्रीराम म भन्दा ४ वर्ष जेठो थियो । उसले मलाई काली भनेर जिस्क्याउने गर्थ्यो । तर म भने त्यति वास्ता गर्दैनथेँ ।एक दिन मैले उसलाई जिस्क्याएँ । ‘हिरो बनेर कता नि ? केटी भेट्न कि क्या हो ?’ बाटोमा एक्लै हिडिरहेको बेला मैले उसलाई भनेँ । कहिल्यै यसरी नबोल्ने मान्छेले त्यस्तो कुरा सोधेकाले होला, ऊ चकित भयो र भन्यो, ‘लौन हामीसँग पनि बोल्न मिल्दो पो रहेछ, के को केटी भेट्न जानु नि ? छेउमै भएकी तिमीले त पत्याउँदिनौं ।' पत्याएरै त सोधेको नि मैले पनि तुरुन्तै जवाफ फर्काएँ । ऊ हाँस्दै आफ्नो बाटो लाग्यो । म पनि आफ्नै बाटो लागेँ ।
केही बेरपछि म पनि आफ्नो घरबाट लस्किदैं रोडमा निस्किएँ । म उसको घरमा जाने दाउ हेरेर बसिरहेकी थिएँ । किनकी गाउँघरमा कुरा काट्नेहरु धेरै हुन्छन् ।दिउँसो मेरो योजना सफल हुन सकेन । तर साँझ पख भने म उसको घरमा पुगेरै छाडेँ । आखिर लोडसेडिङले सबैतिर अँध्यारो भएको थियो । ‘ओ हिरो दाई, के गरेर बसेको ?’ उसलाई देख्नासाथ मैले सोधेँ । ‘के हुनु नि, चाउचाउ पकाउन थालेको, के कामले आयौ ?’ उसले उल्टो गर्‍यो । ‘काम नभई यहाँ आउनै हुँदैन कि क्या हो ?’ मैले पनि प्रश्नबाटै जवाफ दिएँ ।
‘कहिल्यै नआउने मान्छे अचानक आउँदा अचम्म लागेर सोधेको नि,’ उसले कुरा अघि बढायो । चुलोबाट उसले चाउचाउ निकाल्यो । ‘खाने हो ?’ उसले मतिर हेर्दै सोध्यो । ‘चाखौं न त,’ ऊसँग नजिक हुने मौकाको प्रतिक्षामा मैले भनेँ । एउटा कचौरामा मलाई चाउचाउ दिदैं ऊ पनि अर्को कचौरामा लिएर खान बस्यो । चाउचाउ खाइसकेपछि केहीबेर हाम्रो सम्बाद बन्द भयो । के कुरा गर्ने भन्नेमा म अन्यौलमा थिएँ, सायद ऊ पनि त्यस्तै अन्यौलमा थियो । ऊ कचौरा उठाउँदै थियो । मौका छोपेर मैले उसको लाडो भएनिर हात पुर्‍याएर भने, ‘म उठाइ हाल्छु नि ।’ तर मेरा हातले उसको लाडो भेटेन क्यार, मैले केही पत्तो नै पाइनँ । ऊ झसङ्ग भएको थियो तर केही भनेन । सिर्फ मेरो अनुहार आर्श्चर्यजनक रुपमा हेरिरहृयो । ‘के हेरेको नि,’ मैले परिस्थितीलाई अन्यत्र मोड्ने कोसिसका साथ भनेँ - 'तिमी पनि हुर्किछौं भनेर हेरेको नि,’ उसले भन्यो । ‘किन र ?,’ मैले सोधेँ । ‘केही हैन, भइ गो,’ उसले छोटो जवाफ दियो । म कुरा अघि बढाउन चाहन्थेँ ।
‘ए.. त्यस्तो पो ।’ मैले बल्ल बुझेँ । अनि महसुस गरेँ, अब उसलाई पनि केटी चाहिएको छ । मुख खोलेरै भनेँ, ‘त्यसो भए अहिले यसलाई केटी चाहिएको हो त ?’ अनि उसले पनि जिस्किदैं जवाफ थियो, ‘किन र ? तिमी मान्छ्यौं ?” के गर्न ?’ अलिअलि बुझे पनि मैले नबुझेजसरी सोधेँ । ‘पहिला मान्छु त भन न, के गर्ने भन्ने कुरामा त म छँदैछु नि ।’ उसले भन्यो । ‘भन्दै नभनिकन मैले के मान्नु नि ? के गर्न भन्नु न त ?’ उसले आफ्नो लाडोतिर संकेत गर्दै स्पष्टसँगै भन्यो, ‘यसलाई त्यहाँ छिराउन, हुन्छ ?’ बल्ल कुरा सही मोडमा पुगेको थियो । तै पनि ऊबाट अझ प्रष्ट कुरा सुन्ने उद्देश्यले मैले सोधेँ, ‘त्यसलाई यहाँ छिराउँदा के हुन्छ ?’
उसले भन्यो, ‘त्यो त छिराइसकेपछि तिमीले पनि थाहा पाइहाल्छौं नि ।’मैले केही नबोली उसको लाडोमा पुनः आफ्नो हात पुर्‍याएँ । बेलाबेलामा तनक्क तन्किएको जस्तो लाग्यो । अनि उसले पनि केही नबोली आफ्ना हातले मेरो स्तन माड्न थाल्यो । मैले पनि बल लगाएरै उसको लाडोलाई च्याप्प समातेँ । उसले मेरा स्तनलाई बेस्सरी निमोठ्यो । ‘ऐया, दुख्यो । कस्तो माया नगरी निमोठेको ?’ मैले भनेँ । प्रत्युत्तरमा उसले भन्यो, ‘तिमीले चाही मेरो डन्ठालाई माया गरेर समातेकी छौ र ?’ हामी यसरी नै एक अर्काका अंग खेलाउन थाल्यौं । यो मेरो जीवनमा नौलो अनुभव थियो । मलाई मज्जा लागिरहेको थियो । अनि उसले मेरो भेस्ट खोल्यो ।
‘छ्या’ भन्दै मैले हात ओछ्यानमा पुछेँ । उसले घिन नमानीकन खेलाइरह्यो । अनि औंला पसाउन थाल्यो । आफ्नो माझी औंला पसाउँदै निकाल्दै गरिरह्यो ।’कस्तो लागेको छ ?’ उसले सोध्यो । ‘मज्जा आइरहेको छ ।’ मैले जवाफ दिएँ । ‘अब काम सुरु गरौं है ?’ उसले भन्यो । ‘अझ काम सुरु भएकै छैन ?’ मैले भनेँ । ‘यसलाई खै र छिराएको ? मुख्य काम त बाँकी नै छ ।’ उसले भन्यो । मेरो पुतीको मुखमा लाडोको टुप्पो रगड्दै उसले भित्र पसाउन सुरु गर्‍यो । सुरुमा त निकै आनन्द आएको थियो तर भित्र पस्न थालेपछि मलाई दुख्यो । मैले सोचेँ, ‘मेरो पुतीमा कुनै पनि लाडो छिर्न सक्दैन ।’ किनकी पहिला पनि विनोद अंकलले पसाउन नसकेर नै छोड्नु भएको थियो । 'केही हुँदैन, एकैछिनमात्र दुख्छ,’ उसले मलाई सान्त्वना दिइरहेको थियो ।
मलाई साह्रै दुख्यो र चिच्याएँ, ‘ऐया ममी, म मरेँ ।’ ऊ केही बेर शान्त भयो, यसो पुतीतिर हेरेको त करिब एक इन्चजतिमात्र बाहिर रहने गरी उसको लाडो पसिसकेछ । पोल्ने र दुख्ने पीडाले एकसाथ म छट्पटाएकी थिएँ । यत्तिकैमा उसले अलिकति बाहिर तानेर फेरि लाडोलाई धसायो । यतिबेला भने उसको पुरै लाडो मेरो पुतीभित्र छिरेको थियो । जमिनमा किला ठोकेको भन्दा कम थिएन होला उसको लाडो मेरो पुतीभित्र । अनि बिस्तारै उसले बाहिरभित्र गरी धक्का दिइरहेको थियो । ‘ऐया, भयो… अब त छोड्नुस्… ।’ दुखाइ सहन नसकी म अलाप गर्दै थिए । तर उसले किन छोड्थ्यो र ? उ त झन मच्चिन पो थाल्यो । आफ्नो पीडा सहेर बस्नुबाहेक मसँग कुनै बिकल्प नै थिएन । केही बेर पछि उसले लाडोलाई जोडदार धक्काका साथ भित्रै ठेल्यो । सायद अघिको तुलनामा अहिले उसको लाडो झनै भित्रसम्म पुगेको थियो । अनि केही बेरमै लाडो छट्पटाएको जस्तो अनुभव मैले गरेँ । ’आह..’ गर्दै उसले आफ्नो लाडोलाई केही बेर भित्रै राख्यो । अनि मेरो शरीरमाथि लम्पसार परेर सुत्यो । मानौं अघिको उफ्राइले ऊ निकै थाकेको छ । मैले उसलाई पल्टाउने कोसिस गरेँ । उसको पनि मन अघाएछ क्यार । यसपटक उसले आफ्नो शरीर ममाथिबाट हटायो । अनि चुपचाप कपडा लगाएर म उसको घरबाट बाहिर निस्किएँ ।
यसको बाँकी भाग अर्को भागमा लिएर आउनेछु धन्यबाद ।
मैले त्यस बेला चिकाइको स्वाद थाहा पाएँ : भाग 1 2017-05-17T12:41:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: मैले त्यस बेला चिकाइको स्वाद थाहा पाएँ : भाग 1